Homepage - Kpesa ya Ugbu a
Kpee Ya Ugbu a
Naanị saịtị WordPress
Banye ndị ahịa
Kwado Gị na Mgbochi nke Emeghị Ihe n'eziokwu na Omume rụrụ arụ na-arụ ọrụ
Àgwà na-adịghị mma na-efu ụlọ ọrụ ọtụtụ ijeri dọla kwa afọ. Ndị otu nwere ụlọ ọrụ hotline kwụụrụ onwe ha belata ọkara ọghọm.
Na-akwado ụlọ Nkuzi na ntule
BESPOKE & Pụrụ iche Ileba usoro - EGO®
OGE 24 N’ụbọchị, N’ SEWA asaa
IHE NA-AKPATAGH WH IHE NA-AKPỌTA HOTLINE
Kpee ya Ugbu a ™ na akwado ngwa ahia gi na ngwa oru iji kwalite ebe oru nke emeghi ihe n'eziokwu na agwa ojoo.
Kpesa ya Ugbu a with na gi na oru gi a ka imepụta omenani n’ebe oru nke ikwesighi ntụkwasị obi na iguzosi ike n’ezi ihe. Nnyocha na-egosi ịnwe hotline ma ọ bụ usoro ntanetị nwere onwe ya na nzuzo na-ebelata ihe ize ndụ site na omume adịghị mma, dị ka wayo ma ọ bụ iji ike emegbu mmadụ.
Anyị na -ejikọ ọkụ ọkụ akụkọ anyị na agụmakwụkwọ, nkwado na nyocha na -aga n'ihu iji nyere gị aka iru ọnọdụ ndị ọrụ gị, n'otu oge, na -agba ha ume ka ha kọọ omume ọjọọ ọ bụla na nzuzo, nchekwa na nzuzo.
ele anyị amụma nzuzo.
nke aghụghọ ọrụ bụ achọpụta site n'ọnụ
nke otu òtù ego na-eme atụmatụ na-efu n'ihi wayo kwa afọ
O yikarịrị ka ndị ọrụ na-achịkọta ndụmọdụ ma ọ bụrụ na òtù dị iche iche emejuputa ọzụzụ mmuta wayo
EthicsPro® - urenọ ná Ntụkwasị Obi, Amaghị Aha, Mfe
Ndi ahia gi ohuru na EthicsPro®? You chọrọ ịchọpụta ozi ndị ọzọ?
Anyị emechiela gị.
Iji nweta akwụkwọ ntuziaka anyị, biko pịa n'okpuru.
Nweta ụkpụrụ omume
Mara: Akwụkwọ ndị a amachibidoro ịnweta. Ọ bụrụ na ịmaghị ma ọ bụrụ na ị bụ gị, nwee nsogbu paswọọdụ, ma ọ bụ chee na ịchọrọ akwụkwọ ndị a, biko kpọtụrụ anyị.
Anyị na-enweta nsonaazụ.
Report It Now’s whistleblowing hotline enyewo anyị ọrụ a ala, onwe usoro ebe ha nwere ike na-akọ unethical omume. N’ụlọ ọrụ ebe aghụghọ pụrụ ime, ọrụ ha azọpụtala anyị ọtụtụ puku dollar kemgbe ọtụtụ afọ.
- Lọ nri
Kpọtụrụ anyị ka ịmalite
Ọ ga-amasị anyị inye aka n'ụzọ ọ bụla anyị nwere ike. Dobe anyị ozi ma anyị ga-alaghachikwute gị ozugbo anyị nwere ike. N'aka nke ọzọ, biko kpọọ anyị na ekwentị site na iji nọmba dị n'okpuru.
Kpesa ya Ugbu a ™ Ltd.
Iklọ Ọrụ Ozi Waikato
Hamilton nke 3240
Anyị bịara inyere gị aka. Mee mkpesa
Copyright © 2021 · Banye
ỌH TOR TO